परीक्षा सफलताको लागि प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स परीक्षा सफलताको लागि प्रार्थना
परीक्षा सफलताको लागि प्रार्थना
आज हामी परीक्षा सफलताको लागि प्रार्थनाको साथ व्यवहार गर्ने छौं। आज हाम्रो संसारमा संस्थाले सफलता मापन गर्ने प्रमुख तरिकाहरू मध्ये एक 'परीक्षा' को माध्यमबाट हो परीक्षा भनेको कुनै व्यक्तिको ज्ञान वा विषय वा कौशलमा दक्षताको औपचारिक वा लिखित परीक्षा हो। यो एक व्यक्तिको ज्ञान मापन गर्न शैक्षिक मूल्यांकन हो।
परीक्षा कहिलेकाँही धेरै तनाव, डर र तनावको साथ आउँदछ यो लेख्नु अघि पनि। यति धेरै विद्यार्थीहरू बिरामी हुन्छन् नकारात्मक मानसिकता को परिणामको रूपमा उनीहरूको परीक्षाको बारेमा संज्ञानात्मकमा दर्ता गरियो। परीक्षा सफलता लेखिएको एक परीक्षाको अनुकूल परिणाम हो। परीक्षा सफलताको लागि लिइएको प्रत्येक परीक्षाको लक्ष्य हो। एक सकारात्मक मानसिकता संग परीक्षा हल प्रवेश परीक्षाको सफलता प्राप्त गर्न मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
परीक्षा सफलता प्राप्त गर्न को लागी, हताशता मा सेट, केही अतिरिक्त साधारण शक्तिको खोजी मा लाग्छ जबकि धेरैलाई पक्राउ पर जब निष्कासन गर्न नेतृत्व जो परीक्षा हल गर्न मा चुरोट cheats माने छैन। केवल भगवानले शैक्षिक सफलता प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ जबकि एक पढ्न / अध्ययन गर्नुपर्दछ। तपाइँको प्रार्थनाको अतिरिक्त तयार गरेर आफ्नै भूमिका खेल्नु नै शैक्षिक सफलता हो।
परीक्षा सफलता प्राप्त गर्न सुझावहरू
भगवानलाई पहिले राख्नुहोस्
बाइबल भन्छ प्रभुमा तपाईको सारा हृदयले भरोसा राख्नुहोस् र तपाईको समझमा भरोसा नगर्नुहोस्, तपाईले आफ्ना सबै मार्गमा उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र उसले तपाईको बाटोलाई डोर्‍याउनेछ (Prov:: 3--5)
परमेश्वर हाम्रो जीवनको सबै पक्षमा सामेल हुन चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो वित्तिय मात्र सीमित हुन चाहनुहुन्न तर शिक्षाविद्हरू सहित सबै क्षेत्रहरूमा।
विद्यार्थीहरू एक्लै परीक्षाको समयमा शैक्षिक मद्दतको लागि परमेश्वरमा भाग्दै गरेको पाइएको छ, तर यो गलत छ, उहाँ सेमेस्टरको शुरूदेखि नै संलग्न हुनुपर्छ।
केवल भगवानले मात्र शैक्षिक सफलता प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान पाउँदा हामीलाई शिक्षाविज्ञानको अगाडि अगाडि नै उसलाई सहायता पुर्‍याउँछ केवल परीक्षा मात्र होइन।
अध्ययन गर्न समय निकाल्दै
परीक्षा सफलता प्राप्त गर्न जादू होईन, तपाईले यो प्राप्त गर्न अतिरिक्त परिश्रम गर्नु पर्छ।
उचित अध्ययन प्रत्येक दिन गर्नुपर्दछ, तपाईको व्यस्त तालिका भन्दा बाहिर पनि।
प्रत्येक दिन कक्षामा सिकाइएको कुराको माध्यमबाट जाँदा तपाईले विषय / पाठ्यक्रमसँग परिचित हुनुहुनेछ जुन पढ्नु अघि सेमेस्टरको अन्त्यसम्म पर्खनु हुँदैन।
दिनको एक विशेष समयलाई मित्र, परिवार, च्याटबाट टाढा राख्नु र यसलाई पूर्ण अध्ययनको लागि बनाउनु भनेको परीक्षाको सफलता प्राप्त गर्ने सुझावहरूको एक हो।
गहन अध्ययनमा संलग्न भएपछि तपाईले जे पढ्नु भयो त्यसमा विश्वास हुनुपर्दछ र तपाईले परीक्षा पानामा भर्नु भएको उत्तरहरूमा पनि विश्वास हुनुपर्दछ।
शैतान काची छ कि तपाईं सही उत्तर मेटाउन र तपाईं लेख्न को लागी तपाईंको टाउको गलत उत्तर ल्याएर तपाईं श doubt्का ल्याउने एक तरीका छ।
विद्यार्थीहरू असफल बनाउनको लागि शैतानको सब भन्दा ठूलो उपकरण शंका हो, यसलाई अनुमति नदिनुहोस्।
सधैं विश्वास गर्नुहोस्!
अध्ययन साझेदारहरूको समूह छ
स्कूलमा तपाईको वरिपरी कुनै पनि साथीहरू जम्मा नगर्नुहोस्, व्यावहारिक साथीहरू छन् जससँग तपाईं अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू च्याट, गेस्टहरू र एक्लो रमाइलोको लागि होइन, तपाईंको साथीहरू तपाईंमा शैक्षिक प्रभाव प्रदान गर्नको लागि हो।
तपाईंले पढ्नु भएको साथीहरूको समूहले तपाईंलाई पढ्नको लागि केही प्रकारको प्रेरणा प्रदान गर्दछ किनकि तिनीहरू तपाईंसँग समान लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरू हुन्। यसले तपाईंलाई आवश्यक नैतिक समर्थन र प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ। यो रमाइलो र रमाईलोको पनि एक रूप हो।
नकारात्मक मानसिकता मेटाउनुहोस्
परीक्षा भनेको तनाव, डर र तनावको साथ आउने लोकप्रिय हो जुन सामान्य हो। यद्यपि, धेरै नकारात्मक सोचले तपाईंको प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ।
नकारात्मकताको एक विशाल अंश लिनको लागि कोठा दिई तपाईं आफ्नो पढ्नु भएको सबै बिर्सन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई तपाईंको राम्रो ग्रेडबाट वञ्चित गर्दछ। तपाईले पाउनु भएको प्रत्येक मानसिकता वास्तविकतामा परिणत हुन्छन्, जब तपाईले कुनै पाठ्यक्रमलाई धेरै गाह्रो देख्नुहुन्छ, तब यो वास्तविक नै गाह्रो हुन्छ। परीक्षा हलमा जानु अघि परीक्षाको बारेमा सबै नकारात्मक मानसिकता मेटाउनुहोस्।
तपाइँको नोटहरू एक्लै पढ्न रोक्नुहोस्। गहिरो पढ्नुहोस्, गहिरो खोजी गर्नुहोस्, विगतका प्रश्नहरूको प्रयोग गर्नुहोस्, इन्टरनेट खोजी गर्नुहोस्, पाठ्य पुस्तकहरू आदि प्रयोग गर्नुहोस्
आफैलाई सीमित गर्नाले तपाइँ सफलता प्राप्त गर्दैनौं। हराउनुहोस्! तपाईको अध्ययन कोर्ससँग सम्बन्धित पुस्तकहरू खोजी गर्न पुस्तकालयमा जानुहोस् यसले तपाईंको क्षितिजलाई विस्तार गर्दछ र तपाईं परीक्षा प्रश्नहरू मात्र होइन जीवन प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम हुनुहुनेछ।
शरीर र दिमागका लागि उचित आराम आवश्यक छ। लामो घण्टा पढे पछि आराम गर्नु आवश्यक छ किनकि दिमागले काम गरिसकेको छ। जब मस्तिष्कमा काम हुन्छ त्यहाँ धेरै चीज बिर्सने उच्च प्रवृत्ति हुन्छ तपाईले परीक्षा हलमा अस्थिरताका कारण पढ्नुभयो।
तपाईलाई यो याद गर्न पनि गाह्रो लाग्छ कि तपाईले पढ्नु भएको कुरा याद गर्नु हो जसले संघर्ष, निराशा र रिसलाई निम्त्याउन सक्छ। एकचोटि तपाईले विश्राम लिनुभएन भने उच्च प्रवृत्ति हुन्छ तपाई परीक्षा हलमा चक्कर आउँनुहुन्छ जसले परीक्षा हलमा दिमागलाई सुस्त बनाउन सक्छ। आराम धेरै आवश्यक छ।
परीक्षा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्
यो प्रार्थना पछि के गर्ने पहिलो चीज। निर्देशनहरू परीक्षकले तपाइँले के गरेको चाहन्छ, कसरी प्रश्नहरूको उत्तर दिन, कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन, र परीक्षाको क्रममा नोट लिनको लागि अन्य आवश्यक कुराहरू दिशानिर्देशनहरू छन्। निर्देशनहरूलाई बेवास्ता गर्नाले तपाईंलाई ठूलो सजायमा पुर्‍याउनेछ।
सँधै निर्देशनहरू पढ्नुहोस्!
पिता, म यो परीक्षा लेख्न को अनुग्रह को लागी धन्यवाद दिन्छु, तपाईं येशूको नाम मा उत्साहित हुन।
तपाईंको शब्द जेम्स १: in मा भन्छन्: 'यदि तिमीहरू मध्ये कसैमा ज्ञानको कमी छ भने, उसले परमेश्वरसँग मागोस् जसले सबै मानिसहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक दिन्छ' बुबा म येशूको नाममा बुद्धिको लागि अनुरोध गर्दछु। मलाई तपाईंको शक्तिशाली शक्तिमा यस परीक्षामा सफलता दिनुहोस्।
प्रभु, मलाई परीक्षा हलमा आकर्षणको साथ व्यक्त गर्न अनुग्रह दिनुहोस्। म बिर्सिने हरेक भावनाको बिरूद्ध आउँछु। म आदेश दिन्छु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अनुग्रह मसँग येशूको नाममा हुनेछ।
हे परमेश्वर, तपाईं सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईको ज्ञानको अन्धकारले मेरो ज्ञानको अन्धकारमा चम्काउन दिनुहोस्, येशूको नाममा मेरो सबै स्पष्टीकरणहरूमा सही हुन अनुग्रह दिनुहोस्।
म प्रार्थना गर्छु कि मेरो अनुग्रहले मेरो लागि बोल्नेछ जहाँ मेरो नश्वर ज्ञान समाप्त भएको छ। मार्करको अगाडि प्रभु, मलाई येशूको नाममा अनुग्रह दिनुहोस्।
जसरी एस्तरले राजालाई मन पराउँछिन्, हे प्रभु, मलाई मेरो परीक्षकको नजरमा खुशी पार्न मद्दत गर्नुहोस्।
तपाईंको अनुग्रह जसले हाबिलको रगतको तुलनामा राम्रा कुरा बोल्छ, येशूको नाममा बोल्नेछ
म मेरो कागजातहरू येशूको रगतले भिजाउँछु।
म तपाईंसँग मेरो हातहरू जोड्दछु, म असफल हुनेछैन किनकि तपाईं कहिल्यै येशूको नाममा असफल हुनुभयो।
मलाई येशूको नाममा याद राख्ने स्मृति दिनुहोस्।
म येशूको नाममा परीक्षा हलमा कहिल्यै पक्रिनेछैन
म परीक्षामा सफलता को लागी तपाईंको नाम प्रभु धन्य हुनुहुन्छ मेरो नाम मा।
कुनै पनि कुरा गर्न भगवानको लागि असम्भव छ, यो परीक्षा मेरो लागि असम्भव हुनेछ येशूको नाममा असफल हुन
परीक्षा सफलता प्रार्थना
परीक्षाको लागि प्रार्थना
सफलताको लागि प्रार्थना
अघिल्लो लेखमा२०११ मा प्रार्थना गर्नका लागि दस कुराहरु
अर्को लेखमानम्रताको लागि प्रार्थना अंकहरू
खराब पोशाकहरूको बिरूद्ध प्रार्थना
नोभेम्बर 21, 2020
प्रार्थना पोइन्ट पहिलो बच्चा विरुद्ध युद्ध काउन्टर गर्न